चीन र रूसले सुन्दैछन् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फोनका कुरा ! – Daunne News
चीन र रूसले सुन्दैछन् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फोनका कुरा !
By Daunne News	 On कार्तिक ८, १६:५१
अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार युद्धका क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अघिल्लो चाल थाहा पाउन चीन र रूसले ट्रम्पको आईफोन ट्याप गरिरहेको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् ।
अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीको लाखौँ चेतावनीका बावजुद राष्ट्रपति बनेपछि पनि डोनाल्ड ट्रम्पले आईफोनको मोह छाड्न सकेका छैनन् । त्यहीकारण यसको फाइदा उठाउँदै प्रतिद्वन्द्वदी देशका जासुसले ट्रम्पको व्यक्तिगत कुरा सुनेर आफ्नो सरकारलाई लगातार सूचना दिने काम गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाका दुई प्रमुख पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्स र न्यूयोर्क पोस्टले सुरक्षा एजेन्सीका सुत्रलाई उधृत गर्दै यस्तो समाचार प्रकाशित गरेका छन् । यी दुवै पत्रिकाले एकदमै असुरक्षित मानिनने आईफोनबाट अमेरिकी सुरक्षामाथि ठुलो खतरा मडरिइरहेको जिकिर पनि गरेका छन् ।
सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्ना साथी र नजिकका नातेदारसँग सम्पर्क गर्नका लागि निजी आईफोनको प्रयोग गर्छन् । यसका कारण चीन र रूसको सरकार आफ्ना जासुसको सहयोग लिएर मोबाइल टावर नै ह्याक गरी राष्ट्रपति ट्रम्पको निजी कुरा आफ्नो सरकारकहाँ पुर्याइरहेका छन् ।
सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आईफोन अति नै मन पर्छ । अहिलेको समयमा उनी तीनवटा आईफोन प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यिनमा दुई आईफोन सरकारी हुन् जसलाई केही हदसम्म अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सी सीआईएले सुरक्षित बनाउने कोशिश गरेको छ । तर निजी कुराकानीका लागि राष्ट्रपति ट्रम्प अर्को आईफोनको प्रयोग गर्छन् । सुरक्षा एजेन्सीले यस तेस्रो आईफोनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
न्यूयोर्क टाइम्सलाई प्राप्त सूचना अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प निजी आईफोनमार्फत् केही खास मित्र र पुराना निकटहरुसँग कुरा गरिरहन्छन् । यस वार्तालापमा ट्रम्पले साधरणत: साथीको अवस्था बुझ्न र मिडियामा आएका आफ्ना खबर बुझ्ने गर्छन् ।
सुरक्षा एजेन्सीका अनुसर आफूहरुको कयौँ पटकको कोशिशका बाबजुद राष्ट्रपति ट्रम्प निजी आईफोनको प्रयोग बन्द गरिरहेका छैनन् । उनीहरुले यो आईफोनबाट ट्रम्पले कम्तिमा अमेरिकी सुरक्षा र सुरक्षा एजेन्सीबारेमा कुनै कुरा नगरे हुन्थ्यो भन्ने कोशिश नगरेका पनि होइनन् ।
समाचार अनुसार चीन सरकारले राष्ट्रपति ट्रम्पका साथीहरुको लामो सूची नै बनाएको छ । र, उनीहरुको फोनलई सर्भेलेन्समा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ। यस सूचीमा ब्ल्याकस्टोन ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी स्टिफेन ए स्वार्जम्यान पनि छन् ।
यसमा लास भेगासको क्यासिनो मालिक स्टिभ विन पनि सामेल छन् । चीन सरकार ट्रम्पका यी साथीका यस्ता अन्य साथीमाथि नजर लगाइरहेको जसले ट्रम्पका निर्णय प्रभावित गर्ने क्षमता राख्छन् ।
सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपति चुनावका क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्र्याट पार्टीकी उम्देदवार हिलारी क्लिन्टनका निजी ईमेलको दुरुपयोग गरेकोमा कडा आलोचना सहनुपरेको थियो ।
पेन्सन बुझ्न मृत शरीर बोकेर कार्यलयमा पुगेपछि…
उडेको विमानको पाङ्ग्रामा ११ घण्टा बढी लुकेका व्यक्तिको जीवितै उद्धार